Mbola Tsy Hita Ihany Ny Rariny 10 Taona Taorian’ny Fahafatesan’Ireo Boliviana Mpifindra Monina Tao Amin’ny Toeram-piasana Iray Nirehitra Tao Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Mbola Tsy Hita Ihany Ny Rariny 10 Taona Taorian'ny Fahafatesan'Ireo Boliviana Mpifindra Monina Tao Amin'ny Toeram-piasana Iray Nirehitra Tao Arzantina
Voadika ny 04 Avrily 2016 5:45 GMT
Mahatratra 3000 eo ho eo ny orinasa fanaovan-damba miasa “an-tsokosoko” ao an-tanànan'i Buenos Aires, Arzantina, araka ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana eo an-toerana La Alameda . Ireo toeram-piasana tsy ara-dalàna ireo dia matetika mijoro eo anivon'ny fonenan'ny fiaraha-monina, ny eo anoloan'ilay tranobe dia zara raha manome eritreritra amin'izay asa atao an-tsokosoko ao. Ny toe-javatra iainana ao anatiny matetika ao anatin'ny voafaritra ho “tahaka ny fanandevozana” – mpiasa, maro ny avy amin'ny firenena manodidina toa an'i Bolivia, izay voarara tsy hivoaka ny orinasa iasany sy miaina miaraka amin'ny fianakaviany ao. Koa satria maro ny mpiasa no tsy manana taratasy, dia matahotra foana ny fandroahana sy tsy afaka miady amin'ny karama ambany ry zareo, miasa mandritra ny ora maro, sy fikarakarana tsizarizary. Manohy ny asany Ireo orinasa ireo noho ny tombontsoa azony amin'ny tompon'ny marika sy noho ny tambajotra kolikoly miaraka amin'ny mpanara-maso, polisy, ary ny manam-pahefana hafa izay manao masobe tsy mahita amin'ny fandikan-dalàna mitranga.
Fango fanentanana. Fitsarana Luis Viale. “Luis Viale – 10 taona tsy nahitan-drariny – tsy manadino izahay”
Tamin'ny 30 Martsa 2006, nisy afo nipoaka tamin'ny anankiray amin'ireo toeram-piasana, miorina ao amin'ny Làlana Luis Viale manodidina an'i Caballito. Nahafaty ankizy dimy sy vehivavy bevohoka iray ny loza, ireo rehetra ireo dia mpifindra monina Boliviana. Fahasimbana teo amin'ny taribin'ny herinaratra no nahatonga izany. Tsy nisy afa-tsy iray ny fivoahana amin'ny alàlan'ny tohatra any ambony rihana. Ireo sisa tsy maty dia nilaza fa nihidy vy avy any ivelany ny varavarankely ary efa ho 45 minitra ny mpamono afo vao tonga tany amin'ny toerana nisy ny afo. Rehefa ela ny ela tonga tao ny “mpamonjy voina”, dia tsy nisy rano ny kamiao. Ny afo vao maika niredareda.
Folo taona taty aoriana, tsy misy olona notazonina ho tompon'andraikitra, ary ny tsikera dia manondro ny lesoka eo amin'ny rafi-pitsarana Arzantina noho ny tsy fisian'ny fanarenana. Na dia izany aza, izay mety hiova – dia heverina hanomboka ny 18 Aprily 2016 ny fitsarana hamaritana ireo tompon'andraikitra .
‘Mbola misy andevo, mbola misy ny fanandevozana’
Araka ireo sisa tsy maty , ilay orinasa any ambany rihana ary ireo olona monina ao no nipetraka tao ambony . Tamin'ny fotoanan'ny afo, olona 64, anisan'izany ny ankizy 38, no efa nipetraka tao amin'ny orinasa.
Efitra fandroana iray ihany no miasa ary tsy misy ny rano mafana. Nitatitra ny sisa tsy maty fa indraindray dia ilaina ny milahatra amin'ny 3 maraina mba handroana, ka tsy maintsy mamàna rano anaty vilany mba handroan'ny zanany izy ireo. Ny “efitra fatoriana” mirefy 3 x 2,5 metatra dia sarahana fanitso sy elanelanina hazo . Matetika ny kidoro no zaraina miaraka amin'ny rahalahy, dadatoa, sy ny zana-drahalahiny. […] Amin'ny ankapobeny ry zareo dia miasa 14 ora isan'andro ny Alatsinainy ka hatramin'ny Zoma, ary 5-6 ora ny Asabotsy.
Ny vondrom-piaraha-monina toy ny Simbiosis Cultural – voalohany indrindra ahitana tanora Boliviana izay miasa, na efa niasa tamin'ny orinasa fanaovan-damba mitovy amin'izany ao amin'ny faritra lehibe ao Buenos Aires – no niezaka ny hanao izay tsy hialan'ny fifantohan'ny fiaraha-monina ilay loza tao anatin'izay 10 taona izay.
Ao amin'ny andiam-pandraisam-peo ry zareo manolotra tsiahy ny zava-nitranga tao amin'ny orinasa sy resadresaka miaraka amin'ireo sisa tsy maty, izay mitantara ny fitrangan'ny loza . Naneho hevitra araka ny fisehon'ny afo sy ny manaraka taorian'izany ihany koa ry zareo, ary misaintsaina hoe tsy nisy na inona na inona niova hatramin'ny andro nisehoan'ny loza folo taona lasa izay. “Ny fahatsiarovana an-tsaina ny zava-doza dia fitaovana iray entina miady amin'ny ho avy. Tsy hanadino izahay.” hoy ny fanazavana ao amin'ny fandraketam-peo.
Nanao hetsi-panoherana teo amin'ny toerana nisy ny fahamaizana ihany koa ireo olona ireo hanairana amin'ny alalan'ny antsafa natao tamin'ny vavolombelona, ary hanomezam-boninahitra ireo niharam-boina.
Tamin'ny 2011, nisarika ny sain'i Kardinaly Jorge Bergoglio (fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe Papa François) ny toe-draharaha, ka nanaovany lamesa tao amin'ny foiben-toeran'ny La Alameda hiampangana ny fomba fanaon’ireo orinasa fanaovan-damba an-tsokosoko sy ny kolikoly izay manamora izany fomba fanao izany. Nolazaina izy fa niteny izao manaraka izao tamin'izany fotoana :
Efa nilaza aho indray mandeha nandritra ny Zaikabe tamin'ny Taona faha XIII fa efa nampianarina antsika tany am-pianarana hoe efa foana ny fanandevozana, saingy diso izany. Eto Buenos Aires eto, mieboebo loatra, mirehareha loatra, mbola misy ny andevo, ary mbola misy ny fanandevozana. Ny zava-drehetra dia azo alamina amin'ny kolikoly, kolikolin'ny fanahy, ary ny kolikoly manarona ny zava-drehetra.
Mialoha ny fitsarana, niady ho amin'ny zon'ny mpiasa ao amin'ny orinasa fanaovan-damba ny fianakaviana sy ireo mpikatroka amin'ny fikarakara fanentanana an-tserasera antsoina tsotra hoe #JuicioLuisViale ( Fitsarana Luis Viale) mba hampahafantarana ny besinimaro ny raharaha. Ny sehatra iasan-dry zareo dia ahitana tranonkala , Takelaka Facebook, kaonty Twitter ( @JuicioLuisViale ) ary fantsona YouTube . Misy hetsi-panoherana ihany koa nomanina ny 30 Martsa, faha-10 taona nitrangan'ny fahamaizana.
Ao amin'ny vohikala Juicio Luis Viale , manazava ny fanentanana ny antony ampiasana ny voambolana “orinasa fanaovan-damba an-tsokosoko”, na dia mihevitra ary izy ireo fa mety hiteraka olana ny voambolana:
Na dia be ary ny haino aman-jery miantso azy ireo hoe “orinasa an-tsokosoko ,” ny fampiasana azy no olana, satria manambany ny hevitry ny teny ampiharina eo amin'ny orinasa, na , amin'ireo mpiasan'ny orinasa , manafaka ny “mpanamboatra”, na ny marika amin'ny andraikitra rehetra. Ankoatra izany, ny fanendrena toy izany dia mahafaoka ny orinasa fanaovan-damba rehetra – izay misy isan-karazany ny zava-misy ao anatiny – anisan'izany ny fanondranana olona, ny asa an-terivozona, ary ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona hafa. Tsy afaka andraikitra tanteraka ny mpiasan'ny orinasa izay miasa amin'ireo fepetra ireo, ary raha ny marina dia lavitra amin'ny lazaina ho mpandraharaha madinika ny sasany amin'izy ireo. Na izany aza, manampy amin'ny fanesorana ny tompon'ny marika amin'ny olana ny fanilikilihana sy fanambaniana ireo mpiasan'ny orinasa rehetra (anisan'izany ireo lazaina hoe “an-tsokosoko”).
[…] Amin'ity fanentanana izahay nanapa-kevitra ny hampiasa ny teny hoe ” orinasa fanaovan-damba an-tsokosoko” noho ny antony tsotra satria izany dia manampy mba hampielezana ny teny momba ny olana amin'ny fahazoana vokatra tsara kokoa ao amin'ny fikarohana an'aterineto.
Niandry fatratra ny fotoam-pitsarana ireo sisa velona sy ireo leo ny fanambakana ataon'ny orinasa amin'ny fanantenana fa afaka hitondra ny rariny ho an'ireo enina maty niharam-boina 10 taona lasa izay .